Birmannaa! Dhaamsa Hidhamtoota Qilinxoo fi Qaallittii Irraa Dhufe! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBirmannaa! Dhaamsa Hidhamtoota Qilinxoo fi Qaallittii Irraa Dhufe!
#Dhaamsa Hidhamtoota Qilinxoo fi Qaallittii Irraa Dhufe!
“Haalli nuti keessa jirru haalaan yaaddessadha. Tikni Paartii Bashaadhinaa (PP) Oromoo fi Nafcanyaa jechuun hidhamaa jiddutti shira guddaa xaxuun waldhabdee jidduu keenyatti uumaara.
Kana malees hidhamaa haaraa dha jechuun namoota dhibee Koroonaa (COVID-19) Qabaman nutti galchuun dhibeef nu saaxilaa jiru. Maaloo ummata keenya keessaa fi alaa rakkinna keessa jirru kana dhaqqabsiisaa biraan nuuf gahaa!”
OMN: OLLAAN Tarkaanfii Mootummaa Amerikaa gaafate (Sad 17, 2020)
Mootummaan gamtoomanii dhiittaan mirga nama tigiray keessatti mootummaa nafxanaan rawatama jiru akka dhaabbatu gaafte akkasumas ajjeechaan garmalee naannoo beniishangul gumuz keessatti raawachaa jiru fala akka argatu akeekkachiise
Mucaan gaditti agartan kuni Hasan Aliyyi Husseen jedhama. Dhalataa Walloo Kamisee aanaa harxummaa fursee magaalaa jumaatee (cirrattiiti). Gara Sa’ud Arabiyaan deema jedhee eega biyyaa bahee bara tokkoo oli tahee jira. Ijabuutiirraa gara Yaman bahe jechuu malee san booda bakki inni gahe osoo hin baramin jira. Namoonni mucaa kana agartan akka lakkoossa gadii kanaan nuuf bilbiltan kabajaan isin gaafanna.
Lakkoossa abbaa isaa 0912993320
Warra Sa’udii jirtaniif immoo lakkoossa bilbilaa 0596038140 warri agartan kanaan bilbiltanii akka nuuf himtan kabajaan isin gaafanna.
ODUU GAMMACHIISAA !
𝗝𝗲𝗲𝗾𝘂𝗺𝘀𝗶 𝗚𝘂𝗱𝗱𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝗲 𝗢𝗿𝗼𝗺𝗶𝘆𝗮𝗮 𝗞𝗲𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗗𝗵𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲.
𝖩𝖾𝖾𝗊𝗎𝗆𝗌𝗂 𝗄𝗎𝗇 𝗄𝖺𝗇 𝖽𝗁𝖺𝗅𝖺𝗍𝖾 erga 𝗆𝖺𝖽𝖺𝖺𝗅𝗅𝗅𝗂 𝗋𝖺𝖺𝗐𝗐𝗂𝗂 “𝖫𝗈𝗅𝖺 𝖲𝗁𝖺𝗇𝖾𝖾” 𝗃𝖾𝖽𝗁𝖺𝗆𝗎 𝗂𝗋𝗋𝖺𝗍𝗍𝗂 𝗀𝖺𝖻𝖺𝖺𝗌𝗇𝗂 𝖽𝗁𝗂𝗒𝖺𝖺𝗍𝖾𝖾 𝖻𝗈𝗈𝖽𝖺. 𝖠𝗄𝗄𝖺 𝗀𝖺𝖻𝖺𝖺𝗌𝖺 𝗀𝗈𝖽𝗂𝗇𝗈𝗈𝗍𝖺 𝗂𝗋𝗋𝖺𝖺 𝖾𝗋𝗀𝖺𝗆𝖾 𝗄𝖺𝗇𝖺𝗍𝗍𝗂,
𝖢𝖺𝖺𝗌𝖺𝖺𝗇 𝗀𝖺𝗇𝖽𝖺 3267 𝖽𝗂𝗂𝗀𝖺𝗆𝖾𝖾𝗋𝖺.
𝖦𝗎𝗒𝗒𝖺𝖺𝗍𝗍𝗂 𝗀𝖾𝖽𝖽𝗎-𝗀𝖺𝗅𝖾𝖾𝗌𝗌𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖺𝖻𝖻𝖺𝗅𝗅𝖾𝖾 𝖿𝗂 𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗁𝖺𝖺 7-8 𝗍𝗎 𝖺𝗃𝗃𝖾𝖾𝖿𝖿𝖺𝗆𝖺/𝗎𝗄𝗄𝖺𝖺𝗆𝖿𝖺𝗆𝖺𝖺 𝗃𝗂𝗋𝖺.
𝖼𝖺𝖺𝗌𝖺𝖺𝗇 𝖺𝖺𝗇𝗈𝗍𝖺 43 𝗀𝗎𝗎𝗍𝗎𝗆matti 𝖽𝗂𝗂𝗀𝖺𝗆𝖾𝖾𝗋𝖺.
𝖦𝗈𝖽𝗂𝗇𝗇𝗈𝗍𝖺 6 𝗄𝖾𝗌𝗌𝖺𝗍𝗍𝗂 𝖧𝗎𝗆𝗇𝗂 𝖶𝖡𝖮 𝗁𝗎𝗆𝗇𝖺 𝗆𝗈𝗈𝗍𝗎𝗆𝗆𝖺𝖺 𝖼𝖺𝖺𝗅𝖾𝖾𝗋𝖺.
𝖦𝗈𝖽𝗂𝗇𝗈𝗈𝗍𝖺 𝖽𝖺𝖻𝖺𝗅𝖺𝗍𝖺𝖺 3 𝗄𝖾𝖾𝗌𝗌𝖺𝗍𝗍𝗂 immoo humni 𝖶𝖡𝖮 𝗁𝗎𝗆𝗇𝖺 𝗆𝗈𝗈𝗍𝗎𝗆𝗆𝖺𝖺𝗍𝗂𝗂𝗇 𝗐𝖺𝗅𝗊𝗂𝗑𝖺 𝗍𝖺𝗁𝖾𝖾𝗋𝖺.
𝖦𝗈𝖽𝗂𝗇𝗈𝗈𝗍𝖺 𝖮𝗋𝗈𝗆𝗂𝗒𝖺𝖺 𝗁𝗎𝗇𝖽𝖺 𝗄𝖾𝖾𝗌𝗌𝖺𝗍𝗍𝗂 𝗊𝖺𝖻𝗌𝗈𝗈𝗇 𝗁𝗂𝖽𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈𝗈 jalqabeera, 𝗃𝖾𝖽𝗁𝖺 𝗀𝖺𝖻𝖺𝖺𝗌𝗇𝗂 𝗐𝖺𝖺𝗃𝗃𝗂𝗋𝖺 𝖯𝗂𝗋𝖾zidaantiitti 𝖾𝗋𝗀𝖺𝗆𝖾𝖾 𝗀𝖺𝗆𝖺𝗀𝗀𝖺𝗆𝖺𝗆𝖾 𝗄𝗎𝗇.
𝖦𝖺𝖻𝖺𝖺𝗌𝖺 𝗄𝖺𝗇𝖺 𝖻𝗈𝗈𝖽𝖺 koloneel Abiyi Ahmed 𝖽𝖾𝖾𝗆𝖺𝖺 𝗅𝗈𝗅𝖼𝗁𝗂𝗂𝗌𝖺𝖺 𝗒𝗄𝗇 𝖺𝖼𝗁𝗎𝗆𝖺𝖺𝗇 𝖻𝖺𝖽𝖺𝖺 𝗆𝖺𝗅𝖾𝖾 𝖺𝗌𝗂𝗍𝗍𝗂 𝖺𝗄𝗄a 𝗁𝗂𝗇 𝖽𝖾𝖾𝖻𝗂𝗇𝖾 𝗃𝖾𝖼𝗁𝗎𝗎𝗇 𝖪𝖺𝖺𝖻𝗂𝗇𝖾𝖾 𝗁𝗎𝗇𝖽𝖺 𝖺𝗃aje.𝖸𝖾𝗋𝗈𝗈 𝖺𝗆𝗆𝖺𝖺 kana 𝖲𝗁𝗂𝗆𝖺𝗅𝗅𝗂𝗌 𝖠𝖻𝖽𝗂𝗂𝗌𝖺𝖺 𝖥𝗂𝗊𝖺𝖺𝖽𝗎𝗎 𝖳𝖺𝗌𝖺𝗆𝗆𝖺𝖺 𝗊𝗈𝖿𝖺𝗍𝗎 𝖥𝗂𝗇𝖿𝗂𝗇𝗇𝖾𝖾𝗍𝗍𝗂 𝗁𝖺𝖿𝖾. 𝖱𝖺𝗆𝗆𝖺𝖽𝖽𝗂𝗂 𝖿𝗂 𝖻𝗈𝖻𝖻𝖺𝖺 𝖽𝖺𝖻𝖻𝖺𝗅𝗅𝗈𝗈𝗍𝖺𝖺 𝗄𝖺𝗇𝖺𝗌 𝗁𝗈𝗋𝖽𝗈𝖿𝗇𝖾𝖾 𝗂𝗌𝗂𝗇 𝖻𝗂𝗋𝖺𝖺𝗇 𝗀𝖾𝖾𝗇𝗒𝖺.
Raayyaan Ittisa biyyaa Itoophiyaa ifaaf ifatti diigamuun gara Raayyaa Ittisa Amaaraatti deebeera.
ilmaan Oromoo ariitiidhaan keessaa ba’aatii gara uummataafi Waraana Oromoo WBOtti deebi’uu qabdu?
Oromo: Aasxaa Gabroomfataa qabatanii!!